Uphengululo lweWiko Ufeel Prime | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | | Iiselfowuni, Reviews
Sikubudala apho izixhobo eziphakathi kwebanga ziya zitsala umdla ngakumbi. Ngokuqinisekileyo isiphelo esiphakamileyo se-Android senza ukuziva okuncinci nangaphantsi, ubuncinci xa iinkampani ezinje ngeWiko, ezinesiqubulo sazo "Guqula uMdlalo", kwaye kakhulu kangangokuba ufuna ukutshintsha imigaqo yomdlalo, kwaye namhlanje sithetha ngesixhobo esinexabiso elinaso kwintengiso, asisweleli nkcukacha zinye. Kodwa njengokuba usazi kakuhle, KwiActualidad Gadget into esiyithandayo kukuhlalutya olu hlobo lwesixhobo ukuze wazi ukuba ujongene nantoni kwimarike egcwele iifowuni, siya apho kunye nokuhlaziywa kwe-Ufeel Prime.
Njengesiqhelo, yethu modus operandi kukuhlalutya nganye yeentsika ezisisiseko zezixhobo zombane, ke senza ukuba kube lula kuwe ngokuhamba phakathi kweempawu ezahlukeneyo zazo. Kungenxa yoko le nto si-odola yonke into ngokufanelekileyo nangokulula, ukuze ungathandabuzi nakancinci.
1 Uyilo, inqaku eliqinileyo
2 I-Hardware, ekuphakameni koyilo, umgangatho kunye namandla
3 Isikrini kunye nevidiyo yokutya umxholo kuyo yonke indawo
4 Inzwa yeminwe yeminwe ifikelela kubo bonke abasebenzisi
5 Le yikhamera yeWiko Ufeel Prime
6 Inkqubo yokusebenza, ixabiso kunye noluvo lomntu
Uyilo, inqaku eliqinileyo
Singaphambili ifowuni ekumgangatho ophakathi ... uqinisekile? Uya kukufumanisa kunzima ukukholelwa xa ubambe i-Wiko Ufeel Prime okokuqala. Ewe, umva ubunjwe nge-chassis yentsimbi, i-aluminium ebrashiweyo kunye nelogo yeWiko efakwe kakuhle kwaye ngokungathandabuzekiyo iya kutsala amehlo abo bangalaziyo uphawu. Kwinqanaba eliphezulu nelisezantsi licocekile ngombala ofanayo nophawu lwealuminium, ngaphezulu kokuyimfuneko ukuze ingxelo ifike ngokuchanekileyo, kodwa kuya kuba nzima ukwahlula kwi-aluminium ekuqaleni.
Embindini womva sifumana ikhamera kunye nokukhanya kabiniNangona kunjalo, ngaphandle kokuphinda kabini, asifumani mibala eyahlukeneyo, oko kukuthi, zombini izibane zikhupha ukukhanya okumhlophe, ngokungathandabuzekiyo okunika ukukhanya okukhanyayo kwiimeko ezimnyama, kodwa oko kunokunika imibala eluhlaza okwesibhakabhaka ngexesha lokuthatha imifanekiso .
UkuKhanya icandelo eliphezulu, apho siza kufumana khona kuphela i-jack ye-3,5-intshi yeklasikhi, kunye nokujika okuhle ezantsi, iindawo ezibini zokubeka imakrofoni, izithethi kunye negalelo le-microUSB. Kwicala lasekhohlo sineqhosha lenqakraza, likhutshiwe kamnandi nakwialuminium, nakwicala lasekunene islot yakudala yeSIM kunye namakhadi e-MicroSD.
Ngamafutshane, i-Ufeel Prime inyathela ngokuhambelana nezinto kunye noyilo, kuba umphambili ubalulekile phantse i-70% yetotali kwiscreen esineglasi ye-2.5D, ukukhanya kwekhamera yangaphambili kunye neqhosha lasekhaya elinomfundi weminwe Iminwe yeminwe kwifomathi yoomatshini, kunye nendlela ezinzileyo kunye nesaziso se-LED. Ngaphandle kwamathandabuzo, ifowuni ngaphezu kokuhlangabezana noyilo lwanamhlanje kunye nemigangatho yezinto eziphathekayo.
I-Hardware, ekuphakameni koyilo, umgangatho kunye namandla
Ngaba ubulindele iprosesa yeMediaTek? Ulibale, sijamelene nophakathi ophakathi ozimisele ukutyibilika ezipokothweni zabo bathanda izixhobo ezisemgangathweni. Sifumana iprosesa IQualcomm® Snapdragon ™ 430 MSM8937 Octa-Core 1.4 GHz, Cortex-A53, ihamba neAdreno 505 GPU, Oko kukuthi, uya kuba nakho ukuqhuba phantse zonke izicelo kwiGoogle PlayStore ngaphandle kweengxaki. Kodwa ukuba ubulindele ukuba izakuphelela apha, cofa amacala esihlalo kuba okuhle kuyeza, akukho ngaphantsi kwe-4GB ye-RAM, eya kuthi iqinisekise ukuba isixhobo asizukuchasa ukwenziwa kwezicelo zangoku, kodwa uhlaziyo lwexesha elizayo lwe-Android.
Ngokubhekisele kwikhadi lenethiwekhi, Sifumana i-LTE-Cat 4, ukuze sonwabe njenge-4G yesiqhelo kwiinkampani zeefowuni zelizwe. Kwelinye icala, siya kuba ne-WiFi ukuya kuthi ga kwi-150 Mbps yokukhuphela kunye ne-50 Mbps yokulayisha, eyoneleyo yokusa phezulu, yokukhuphela umxholo kunye nokonwabela ngaphandle kwentambo. Ngaphandle kokuthetha ukuba sineBluetooth 4.1.
Kwimeko apho okhathazeka malunga nokugcinwa, kulapho Le Wiko Ufeel Prime ikwakhona nomsebenzi, i-32GB yogcino lwangaphakathi njengomgangatho, yanele uninzi lwabasebenzisi be-smartphone, nangona kunjalo, uninzi lwee gourmets ziya kuba nakho ukusebenzisa ithuba le-SIM khadi yetreyi yokongeza ikhadi le-MicroSD kwaye ifikelele kwi-64GB iyonke. Sisebenzisa ithuba lokuba sithetha ngekhadi le-MicroSD, siyakukhumbuza ukuba sijongane nesixhobo se-SIM ezimbini, sisebenzisa amakhadi amabini e-nanoSIM ukuba asithathi sithuba kwi-microSD slot.
Isikrini kunye nevidiyo yokutya umxholo kuyo yonke indawo
Silapha ngobukhulu obuqhelekileyo, I-intshi ze-5 ngePaneli epheleleyo ye-HD (1920 × 1080), engasiniki ngaphantsi kweepikseli ezingama-441 nge-intshi nganye. Into etsala umdla wethu kwakamsinya nje ukuba siyisebenzise kukuba sinomahluko ophakamileyo kunye nombala, ipaneli ye-LCD eneglasi eyi-2,5D emnandi ekuphathweni kunye ne-digitizer esebenza ngokuthembekileyo kakuhle, enyanisweni kwezinye iimeko ezinje xa sibukele iividiyo zibuthathaka. Ngokuphathelele ukuqaqamba, i-460 bits yokuqaqamba, into enokuvakala ingabalulekanga kwaphela, kodwa eqinisekisa ukukhanya okuhle. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi yiphaneli esenza ukuba siphulukane nokucaca ngaphandle ngaphandle kokukhanya ngokuthe ngqo, le yenye yeendawo ezibuthathaka zeWiko Ufeel Primer, iyazikhusela kodwa ayimi ngaphandle. Ukujonga ixabiso lesixhobo, siyakuxolela phantse ngaphandle kokuthandabuza.
Ngokuphathelele Isandi esinamandla xa sinolungiselelo lwe-mono unokulindela amandla amancinci, into eqhelekileyo kwizixhobo zolu luhlu, nangona kunjalo, malunga noku xa i-Wiko Ufeel isizisela uncumo kwakhona. Nangona kunjalo, kumanqanaba aphezulu ivolumu iqala ukugqwetha, ke ngekhe sincome ukusebenzisa gadalala amandla esandi kwiimeko zangaphandle, kodwa ivolumu ingaphezulu komndilili wezixhobo.
Inzwa yeminwe yeminwe ifikelela kubo bonke abasebenzisi
Ngoku ungayeka ukwenza amehlo kwizixhobo ezibiza kakhulu ngomfundi weminwe. I-Wiko Ufeel Prime iyibeka eminweni yakho ngendlela enomtsalane. Umsebenzisi omangalisayo we-iPhone 6s oshiya iinyawo zakhe enethemba elincinci kwaye abone ukuba isebenza njani i-99% yexesha okokuqala. Ngokungafaniyo nezinye izixhobo kunye nezinye iimveliso ezikuluhlu olufanayo abafundi bazo ngamanye amaxesha bangumqobo kunokongezwa.
Ukongeza, i-Wiko Ufeel Prime yokufunda ngomnwe ohamba kunye neqhosha lokuchukumisa kunye nelomatshini ngaxeshanye, singayisebenzisa ngokunika ukubamba kube kanye ukubuyela ekuqaleni, okanye ukuyicinezela ngokuthanda. Indlela engaphakamanga kakhulu, kodwa intle. Umfundi ofunda ngeminwe unobungakanani obukhulu kwaye ujikelezwe yiringi yentsimbi ethi kwinguqu yayo emhlophe inike ukubonwa okubalaseleyo. Ngamafutshane, yindlela elungileyo yedemokhrasi kwitekhnoloji esele ifunyenwe ngumntu wonke.
Le yikhamera yeWiko Ufeel Prime
Siqala ngasemva, I-13MP inenzwa ye-Sony, i-IMX 258, ilensi ye-5p ebonisa isihluzo esibonakalayo esiluhlaza. Kodwa la ngamanani amsulwa, ke ekuqaleni kweli candelo sikushiyele uvavanyo lokuba yintoni i-Wiko Ufeel Prime enokuthi ikwazi ukuyenza ngaphandle embindini emva kwemini, kwaye isezantsi kancinci kunaleyo inakho ukuyifumana ngaphakathi ngaphakathi kwizibane ezingezizo . Ikhamera yile nto unokuyilindela kwisixhobo esiphakathi, asinakubuza kakhulu kwimeko yokukhanya enemvukelo, iyakwazi ukuthatha imifanekiso eya kusivumela ukuba siyithobele, kodwa ukuba ungumthandi wokufota, ayisiyiyo le nto ifowuni yakho, okanye ujonge kuluhlu olufanelekileyo. Ngamafutshane, ikhamera engasemva ye-Ufeel Prime idibana nezinto onokuzilindela kwisixhobo esinexabiso.
Siya kwikhamera yangaphambili, I-8MP eneflash ye-selfie enobungozi obuncinciNgelixa kuyinyani ukuba inokusikhupha kwindawo exineneyo kubumnyama obupheleleyo, ngamanye amaxesha i "on-screen flash" ingcono, njengoko le flash inamandla amakhulu kwezinye iiselfie. Nangona kunjalo, yinkcukacha eyongeziweyo kwiminyaka ye-selfie. Kufuneka kukhunjulwe ukuba ukwenziwa kweefoto ezithathwe ngekhamera yangaphambili kuyaziwa, kususa ukungcola nengxolo ngendlela ebuthathaka, ngaphandle kwamathandabuzo ikhamera yayo yangaphambili iya kulibamba icandelo loluntu elincinci, nangona inganomsindo I-purist purist (apha ikhoyo).
Inkqubo yokusebenza, ixabiso kunye noluvo lomntu
Uhlolo lweWiko Ufeel Prime
Iprosesa kunye ne-RAM
Ikhamera yangaphambili eqhubekileyo
Phantse iiveki ezimbini ndisebenzisa iWiko Ufeel Prime njengenye yezixhobo eziphambili endihlala ndiziphatha ezipokothweni. Ukususela kumzuzu wokuqala ndayibona, bendisazi ukuba ndijongane nento emangazayo kwaye ibinjalo, kakhulu kangangokuba iya kundibiza ukuba ndiyilahle. Nangona kunjalo, andinakunceda kodwa ndinike uWiko impama encinci esihlahleni ngokubaluleka kwayo ngokwezifiso, ngaphandle kokusebenza kwi-Android 6.0 Marshmallow, ipakethi ye icon kunye nokuma kwayo kunokulahlekisa i-Android purists.
Ungayithenga iNkulumbuso yeWiko Ufeel kwiAmazon ngee- € 230 kuphela, emhlophe / isilivere, igolide kunye ne-anthracite, kunye neefrimu ngokwe-back (into enokubulela ngayo). Ixabiso elincomekayo ngesixhobo esele sinqunyiwe ukusukela ngala mhla ndasikhupha ngaphandle kwebhokisi kwaye ndicebisa ukuba kuthengwe kwabo baphatha uhlahlo-lwabiwo mali olufanayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » UWiko Ufeel Prime, siyakuxelela ukuba le ndlela iphakathi isothusa njani [UPHANDO]